प्रशासनले बिष्णु माझीकको पछ्यौरा र मुखको माक्स खोल्न लगायो ! के दिखियो त ? (हेर्नुहोस भिडियो) - Enepalese.com
प्रशासनले बिष्णु माझीकको पछ्यौरा र मुखको माक्स खोल्न लगायो ! के दिखियो त ? (हेर्नुहोस भिडियो)
इनेप्लिज २०७५ पुष २३ गते २२:३४ मा प्रकाशित
प्रख्यात लोकगायिका विष्णु माझी आइतबार स्याङजाको सीडीओ कार्यालयमा श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीसहित पुगिन् । उनले सँधैझैं पछ्यौरी र मास्कले अनुहार ढाकेकी थिइन् । विष्णु माझी लामो समयदेखि ‘गुप्तवासमा’ रहेको विषयमा मिडियामा आएपछि स्याङजाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषराज निरौलाले चासो दिएका थिए । सुन्दरमणि र विष्णु गाउँमा आएपछि उनले भेटघाटका लागि डाकेका थिए ।
भेटघाटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका एसपी राजकुमार लम्साल पनि सहभागी थिए । लम्सालले विष्णु कुनै परिबन्दमा परेर सार्वजनिक हुन नसकेकी हुन् कि भन्ने आशंकाले प्रशासनमा बोलाएर कुराकानी गरिएको बताए । हेर्नुहोस भिडियो :